Thursday, April 25th, 2019 - 13:36:57
Sunday September 16, 2018 - 09:32:01 in Wararka by
Kooxaha ugu waaweeyn horyaalka ingiriiska ayaa dhamaantood guulo gaaray kulamadii ay ciyaareen ee Todobaadka 5aad ee Premier League.
Chelsea, Man City iyo Arsenal ayaa ka mid ah kooxaha guulaha gaaray waxaana ay u ahayd todobaad fiican, Blues ayaa 4-1 ku adkaatay Man city ayaa 3-0 ku badisay Halka Arsenal 2-1 ay guul ku heshay.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa xaqiiqooyinka iyo xogta laga diwaan galiyay kulamadii ay kooxaha Man city,Chelsea iyo Arsenal guulaha gaareen.
1.Mesut Ozil ayaa saftay kulankiisii 200-aad ee kooxda Arsenal ee Tartamada oo dhan isaga oo xiddiga khadka dhexe dhaliyay 38 gool iyo 66 caawin oo tartamada oo dhan ah.
2.Leroy Sane ayaa ku lu lahaa 18 gool 16-kii kulan ee ugu dambeeyay ee uu Premier League ku ciyaaray garoonka Etihad Stadium (6 goo, 12 caawin).
3.David Silva ayaa dhaliyay goolkiisii 50-aad ee premier League isaga oo noqday xiddigii 5-aad ee sidaas sameeya isaga oo ay kaga horeeyeen xiddigaha Aguero, Toure, Tevez & Dzeko.
4.Xiddiga Sol Bamba goolkana ka dhaliyay kooxda chelsea ayaa noqday xiddigii ugu weynaa ee dhaliya goolkiisii ugu horeeyay ee premier League isaga oo jira 33 sano iyo 244 maalmood tan ilaa Zlatan Ibrahimovic oo gool dhaliyay isaga oo jira 34 sano iyo 316 maalmood bishii August 2016.
5.Tan ilaa markii uu saftay kulankiisii ugu horeeyay ee horyaalka premier League Agust 2012,Eden Hazard ayaa si toos ah ugu lug lahaa goolal ka badan xiddig kasta oo ka ciyaara garabaha ama khadka dhexe horyaalka isaga oo dhaliyay 73 gool sidoo kale caawiye ka noqday 41 gool.
6.Dhamaan 4-ta gool ee uu Granit Xhaka ka dhaliyay premier League ayaa ka dhashay meel ka baxsan dilinta ganaaxa.
7.Eden Hazard ayaa noqday xiddigii 4-aad ee dhaliya wax ka badan hal saddexley horyaalka premier League una dhaliyay kooxda chelsea isaga oo ay ka horeeyeen xiddigaha Didier Drogba, Frank Lampard & Jimmy Floyd Hasselbaink.
8.Xilli Ciyaareedan ayaa ah markii ugu horaysay 110 sano oo ay laba kooxood guul gaadhaan 5-tii kulan ee ugu horaysay tan ilaa 1905-06 & 1908-09).